Ajụjụ - Simatech Inc
Anyị ga-ezitere gị na-emelite price list mgbe ị kpọtụrụ anyị maka ihe ọmụma
Bụ silk fIbroin sericin Free?
All anyị silk fibroin metụtara ngwaahịa, gụnyere degummed silk emep uta eri, silk fibroin ngwọta na soluble lyophilized silk fibroin, na-sericin free, nke pụtara ndị a na ngwaahịa ndị bio-nchekwa na nwere ala immunogenicity.
Gịnị bụ molekụla igwe gị ngwaahịa?
Molekụla igwe nke abụọ anyị na-apụta ngwaahịa, silk fibroin ngwọta na soluble lyophilized silk fibroin, na-ma karịrị 200 KD.
Gịnị bụ mmiri-solubility ma ọ bụ mmiri-insolubility nke soluble lyophilized silk fibroin?
Ngwaahịa a nwere ike kpam kpam etisasịwo n'ime mmiri n'ime 1 na 2 nkeji (lee GIF si "Products" webpage). N'ihi na ọtụtụ n'ime organic solvents, ngwaahịa bụ unyi anaghị agbasa ma ọ bụ ubé soluble ma e wezụga n'ihi hexafluoroisopropanol (HFIP).
Gịnị bụ nke kwụsiri ike nke gị ngwaahịa aha ya bụ soluble lyophilized silk fibroin?
Ebe ọ bụ na vial kpamkpam kara akara, lyophilized silk pụrụ ịnọgide na-anụ maka a ogologo oge nke oge (> ọnwa 18) na ụlọ okpomọkụ na okwu nke anya, solubility, molekụla ibu nkesa na Ọdịdị.
Otú iziga ngwaahịa na ahịa si China?
Products nyere iwu ga-anapụta ndị ahịa n'ime 7 ụbọchị site na mba awara awara ụlọ ọrụ gụnyere FedEx, gbasie na DHL.